Indlela yokuba nobudlelwane obunempilo-Unokuba liqabane elifanelekileyo | Amadoda aneSitayile
Izibini ezininzi ziphinda zicinge ngento yokwazi ukuba zigcina ubudlelwane obunempilo. Ngaphakathi kwiqhina lothando, sisenokungaqondi ukuba yonke into iqala ngonyawo lwasekunene.Ngalo lonke ulwalamano luneempawu zalo zokuqala. uyayibona ipinki Kwaye oko kunokukwenza uthandabuze ukuba olu qhagamshelwano lokuqala luxatyiswa njani.
Ngakolunye uhlangothi, uhlobo lobudlelwane bexesha elide luyabonwa, kunye neminyaka emininzi yobudlelwane. Ikhonkco phakathi kwezi zimbini kunye noncamathiselo ayikuvumeli ukuba ubone ukuba ngokwenene ugcina ubudlelwane obunempilo. Uyabona ukuba kukho undonakele kwaye uyathandabuza ukuba into onayo ingahamba ngendlela elungileyo. Okokuqala kufuneka uhlalutye iinkcukacha ukuze ukwazi ukwenza Uvavanyo lobudlelwane bakho.
1 Bunjani ubudlelwane obunempilo?
2 Iimpawu zokugcina ubudlelwane obunempilo
Bunjani ubudlelwane obunempilo?
Kubudlelwane obuhle ngaphandle kwamahla ndinyuka kufuneka kuvuze uluhlu lweempawu esisoloko singayixabisi okanye siyibethe ngoyaba. Kubalulekile landela le nombolo yeenkcukacha ukuze ubudlelwane kunye nexesha bungasokoli.
Intlonipho luphawu lokuqala. Umntu kufuneka ahloniphe indlela yakho kunye nobuntu bakho ngaphezu kwayo yonke into, kufuneka bakuthande ngokwenene ukuba ungubani kwaye ungubani.
Unxibelelwano oluhle luyaluvuza ulwalamano. Musani ukufihla iimvakalelo, iimvakalelo kunye neenkxalabo ezinokuvela njengesibini. Kufuneka ukwazi ukuthetha kwaye uzivumele ukuba umamele.
Nyaniseka luphawu oluhamba kunye nokuzithemba. Ukuba imfihlelo iqala ukuba khona, ukuba idatha ifihliwe okanye ubuxoki bubanjwe, mhlawumbi oku ungaqalisi ukunika intembeko kubudlelwane obuhle. Inyani yolu hlobo lobuxoki inokukhokelela kwikhwele elingalindelekanga okanye oko akukho trust.
Nika kwaye uthathe Yindlela yokubonisa lonke uthando lwakho. Xa omnye kwaba bantu babini enokuba ekwixesha elibi, omnye kwaba babini Ndenza loo mzamo mkhulu ukugcina intshukumo ephezulu. Inkxaso ibalulekile, kusoloko kukho kwaye kukhuthaza umdla wokumamela kwaye unike igxalaba lakho.
Ungazi njani ukuba iqabane lakho liyakuthanda
Iimpawu zokugcina ubudlelwane obunempilo
Unxibelelwano luhlala luyimotto ephambili kulo naluphi na ulwalamano, zombini usapho kunye nothando. I intlonipho nokunyaniseka. Olu lwazi lubalulekile, kuba unxibelelwano lunokujika lube yingxoxo kwaye akulunganga ukuza kweli gama amaxesha amaninzi. Iingxoxo kufuneka zibe zezonxibelelwano, ngenjongo yokwakha kwaye zingashiyi izinto njengoko bezinjalo. Umbono wayo yonke le nto sinikele ngeenkozo zethu zesanti ukuze ubudlelwane buyakha, ngaphandle kwesidingo sokungena indima eyonakalisayo kunye netyhefu.
Ukuze unxibelelane kakuhle kufuneka uhlale unjalo phawula ngayo nayiphi na inyani, ngembeko kwaye ngaphandle kokuzama ukucaphukisa nabani na. Ukukwazi ukuthetha izinto kufuneka kuhambe ngenjongo yonxibelelwano kwaye hayi ukungxola okanye ukuthetha kakubi.
Abantu ababini unakho fumana ukuthandana ukanti abananto ingako ifanayo. Nangona kunjalo, baye bakhula befumanisa kwaye babonisa into ebalulekileyo kwaye kwangaxeshanye Ukulungisa ulwimi lwakho ukuze ukwazi ukuthetha ulwimi olufanayo, kufuneka ukhangele ukudibana komzimba kunye ukunikezela ixesha elisemgangathweni.
Kufuneka uhloniphe indawo yakho. Kubonakala ngathi ibinzana eliphikisanayo lithetha ukuba kufuneka uchithe ixesha kunye, kodwa umgangatho wexesha phakathi kwesibini usempilweni kakhulu. Abantu ababini abathandanayo bafuna ukuba kunye kwaye gcinani ixesha elide kunye. Enyanisweni, umzamo wokuba kunye nomnye uya kuhlawula umvuzo ekuhambeni kwexesha. Kungenjalo singathetha ngayo ukuxhomekeka, kodwa ngaphandle kokugabadela, ekubeni mntu ngamnye emele abe nendawo yakhe yobuqu. Ukongeza, kusempilweni ukuba wonke umntu abe neyakhe ixesha free kunye nophendlo lobuqu kwaye iqabane lakho kufuneka likuhloniphe.
Ukunyamekela ubudlelwane kufuneka funda ukuphila ngokungafaniyo. Ukuba uthando lukhona ngokwenene, kufuneka uhlale nalo, ngaphandle kokwenza into embi. Kufuneka nazi iimbono zomnye nomnye kwaye phu laphule. Ukuba kufuneka uxoxe ungakwazi incoko, kodwa ngaphandle kokuya kakhulu ukuthiya okanye ukungahloneli.
Ukuba sisibini esonwabileyo kunye nokuba nobudlelwane obunempilo ngumsebenzi wokufaneleka amanqaku amaninzi. Ngoshwankathelo olufutshane le mibuzo ingacaciswa. Unokuhlala ubumba zonke ezo njongo kunye namaphupha ukuze ukukwazi ukomeleza ubudlelwane obufuna. Kufuneka isoloko isesikweni unxibelelwano oluhle y Ngqiyama kwi ngamaxesha onke. Ngamnye kubo kufuneka abe nendawo yakhe, iinjongo kunye namaphupha abo, kwaye kufuneka kube njalo ihlonitshwa ngamaxesha onke.
Ulwalamano oluhle lwenza abantu ababini bazane baze bafune ukwazana ngakumbi. Kufuneka usoloko uvuza ukuncoma omnye komnye kwaye iingxaki kufuneka zizilungise ngokufanayo kwaye khangela izisombululo ezisebenzayo kuzo zombini. Inkxaso kunye nokuqonda kuya kuvuza isiseko esihle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Isibini kunye nokwabelana ngesondo » Indlela yokuba nobudlelwane obunempilo